SOOMAALIDU IYAGAA SACABKA U TUMAYA, HORKACAYANA JABKA & DHIBKA LALA MAAGAN YAHAY | WWW.SOMALILAND.NO
SOOMAALIDU IYAGAA SACABKA U TUMAYA, HORKACAYANA JABKA & DHIBKA LALA MAAGAN YAHAY
Posted on Maarso 2, 2008 by Hamsa Mohamed
Shebelo Telecom oo qalabkii laga gurayo
“Maalintii jimcaha ahayd saxaafadii dalka joogtay oo dhami waxay is hor tubeen goobtii ay dadka soomaalida ahi ku tukadeen salaadii jimcaha. Markii salaadii laga soo dareeray ayey saxaafadii mikrifoonadoodii iyo qalimaantoodii la soo kala baxday si ay su’aalo uga waydiiso waxyaabihii dhacay. Jawaabaha ay halkaa ka heleen ayey ka mid ahaayeen “ANAGAA AL-SHABAAB AH” iyo “ANAGA AYAA DIYAAR U AH DAGAAL iyo MAALGELIN DAGAALNA HII IYO HOOBA ULA KORTAAGAN“.
Oslo (SL.no) Waxaa maalintii khamiistii lagu qabqabtay saddex ruux oo soomaali ah magaaladda Oslo. Dhamaan dadkan ayaa ahaa qaar ka shaqaysta meheradaha sida gaarka ah soomaalida loogu yaqaano ee telefoonadda laga dirto iyo xawaaladaha. Qab-qabashaddan ayaa keentay in saxaafaddu mar kale daba gasho oo ay fiiro gaar ah u yeelato qoomiyadda soomaalida ah ee dalka Norway deggan.
“Arintan ayaa dadka soomaalida ah ku noqotay ka daroo dibi dhal” iyadda oo la ogyahay tuhumadii hore iyo eedaymihii hore ee dadka soomaalida ah ee dalkan Norway deggan hore loogu soo jeedin jiray. Eedaymahaas oo ay ka mid ahaayeen kufsi, dhac, gudniin, shaqo-la’aan iyo dhaqan xumooyin kale oo aan halkan lagu soo koobi karahayn.
Nimankan oo isla markii la xidhay iyaggana lagu soo qabqabtay saddex nin oo kale dalka jaarka la ah Norway ee Sweden ayaa hadaba waxaa lagu eedeeyey arin hore soomaalida loogu tuhmay oo ahayd in ay argagixisadda maalgeliyaan. Tuhunkan iyo qab-qabashadan khamiistii ayaa soomaalidu u turjunteen “wixii xunba xaawaa leh” halkan khubaraddii iyo saxaafaddii dalkana ay u dhaqaaqeen dhamaan wixii khabiir ku sheeg ahaa ee soomaali wax ka yaqaanay.
Waxaa isla markiiba la isla gartay in la rogo aray bixin cusub oo aanay soomaalida Norway hore u maqal oo ah “AL-SHABAAB” taas oo lagu sheegay in ay yihiin niman biraha calaashadda oo khatar ah. Waxaa intaa la sii raaciyey in nimanka la xidh-xidhay ay kooxdaa iyagga ah lacag u direen oo ay taageereen. Erey bixintan ayaad moodaa in lala helay dadka soomaalida ah ee dalkan deggan oo aad moodid in aanay fahmin habka loo isticmaalo saxaafadda. Waxyaabaha lagu dhaleeceyn karana waxaa ka mid ah in ay hor kacayaan oo dhibaatadda iyo jabka lala maaganyahay u sacabtumayaan isla markaana ay qayb ka qaadanayaan.
Tusaale ahaan waxaa jirtay in maalintii jimcaha ahayd saxaafadii dalka joogtay oo dhami is hor tubeen goobtii ay dadka soomaalida ahi ku tukadeen salaadii jimcaha. Markii salaadii laga soo dareeray ayey saxaafadii mikrifoonadoodii iyo qalimaantoodii la soo kala baxday si ay su’aalo uga waydiiso waxyaabihii dhacay. Jawaabaha ay halkaa ka heleen ayey ka mid ahaayeen “ANAGAA AL-SHABAAB AH” iyo “ANAGA AYAA DIYAAR U AH DAGAAL iyo MAALGELIN DAGAALNA HII IYO HOOBA LA KORTAAGAN”
Jawaabaha noocan oo kale ah ayaa hadaba waxaa isweydiin leh ku haboonaanta ay ku haboon yihiin wakhtigan isaga ah ee aynu ku jirno, iyo xaaladda dadka soomaalida ah guud ahaan. Ujeedada maqaalkani maaha dhaleeceyn, laakiin se waxaa waajib ah in la isku sheego wixii dhibaato mooyaane aan faa’iido ku jirin.
Ugu danbeyntii waxaa aan wax wanaagsan ahayn in dhaleeceyn oo keli ah lagu soo koobo maqaalkan. Isla marka khaladka la sheegayo waxaa muhiim ah in wixii fikrad XAL ah la soo gudbiyo. Hadaba fikrad ahaan halkan waxaa lagu soo jeedinayaa in la helo oo soomaalida dhexdeeda looga baahanyahay kala-danbeyn iyo in la isku dayo wixii hadal saxaafadda loo sheegayo in la miisaamo oo laga fikiro hadaladda lagu hadlayaa cawaaqiibta ay keeni karaan. Waxaa kale oo muhiim ah in aan la isku dirin oo aan la iska soo horjeedin dadka shicibka ah ee dalka u dhashay. Taas oo aan ula jeedo in aanu mushtamacu guud ahaan aanu dadka soomaalida ah xumaan la doonayn ee ay jiri karaan koox yar oo saxaafadda u adeegsata kala fogeynta iyo isku dirka dadka.
Ugu danbeyntii halka imika xaalku marayo ayaa ah in lix qof ee Norway iyo Sweden lagu xidhay in saddex ka mid ah la sii daayey. Laba waxaa lagu sii daayey Norway halka hal kuwii Sweden laga sii daayey.
Ka Norway lala hadhay ayaa la sheegay in telefoonkiisa la dhagaystay isaga oo la hadlaya “Dad xagjira” oo ka tirsan wax lagu sheegay ururka “AL-SHABAAB”.
« SIDEYNU KU SOCONO SADDEXDA XISBI SADDEXDOODA HOGAAN BAY U XIDHAN TAHAY SIYAASADII, SIDAASINA DIMUQRAADIYAD MAAHA MADAXWEYNE KU-XIGEENKA SOMALILAND: “Aqoon kasta oo aad leedahay haddii aad Yurub tagto weel uun baad..” »